Trump oo la yimid qorshe cusub oo canshuur oo isaga uu ka faa’iidayo - BBC News Somali
Trump oo la yimid qorshe cusub oo canshuur oo isaga uu ka faa’iidayo
Image caption Hindise sharciyeedka cusub ee canshuurta waa mid u hiilinaya Trump
"Waxa aan samaynayo waa wax fiican, balse ma ahan wax aniga ii fiican, i aamin" ayuu ka yiri Donald Trump mar uu ka hadlayay qorshihiisa cusub ee canshuurta, isaga oo markaas ku sugnaa magaalada Indianapolis.
In la faafaahiyo hindisaha cusub ee canshuurta Trump aad ayay u adagtahay, balse waa arrin si xor ah loo dhihi karo in uu yahay mid isaga laftiisa uu ka faa'iideysanayo.
Qorshahan ayaa waxa uu ku kacayaa lacag dhan $3 tilinyan oo doolar muddo 10 sano dhan.
Ma cadda tusaale ahaan inta uu la'egyahay dakhliga laga rabo qofka marka ay ku waajibayso canshuurtan cusub.
Arrinta ku saabsan dhaqaalaha Trump ayaa ah mid aad u murugsan maadaamaa uu yahay madaxweynihii ugu horeeyay Maraykanka oo muddo 40 sano ka badan aanan shaacinin canshuurta uu bixiyo.
Markii Aqalka Cad uu ka hadlayay hindisaha cusub ee canshuurta. La taliyaha madaxweynaha ee dhanka dhaqaalaha Gary Cohn ayaa iska diiday in uu faahfaahin ka bixiyo sida qorshahan cusub uu u saamaynayo waajibaadka canshuurta ee madaxweynaha.
Marka laga qiyaas qaato xogtii la faafiyay bishii March ee ku saabsan canshuuraha uu bixiyay 2005-tii, ayaa waxaa laga hadli karaa dhawr arrimood oo hindisan cusub uu ka quseeyo canshuur-celinta Trump.
Inkasta oo dad badan oo Amerikan ah ay sare u kici doonto canshuurta ay bixiyaan, haddane Trump waxaa laga yaabaa in uusan waxbo bixin ama wax yar bixiyo.
Seddaxda sifo ee soo socota ayaana laga yaabaa in uu uga faa'iideysan doono.
Canshuurta badiilka ah
Image caption Trump waxa uu wareejiyay maamulka shirkadihiisa balse ma uusan wareejin lahaanshiyaha
Qorshaha loo yaqaano Alternative Minimum Tax (ATM) ama canshuurta ugu yar ee la bixiyo ayaa gabi ahaanba meesha laga saari doonaa haddii hindisahan cusub ee Trump uu guuleysto.
Markii koowaad ATM waxaa la meelmariyay sanadkii 1982-dii, ujeedkuna wuxuu ahaa in dadka taajiriinta ah aysan la goosanin canshuurta.
Waa hab kale oo loo xisaabiyo canshuuraha qofka ku waajibtay, taas markii loo adeegsaday Trump sanadkii 2005-kii, waxa uu ku qasbanaaday in uu bixiyo $31 milyan oo doolar oo canshuur ah.
Hadda waxa uu doonayaa in uu meesha ka saaro nidaamka ATM ee isaga uu dhibka kala kulmay mar.
Canshuurta Hantida ma guurtada ah
Image caption Trump waxa uu leeyahay hanti badan oo ku kala faafsan adduunka
Haddii uu meelmaro qorshaha cusub ee Trump waxaa gabi ahaanba meesha laga saari doonaa canshuurta hantida ma guurtada ah taas oo uu qofka dhaxlay.
Waxa ay canshuurtan boqolkiiba 40% ah ku waajibtaa hantida uu qofka dhaxlay haddii ay ka badantahay $5.49 milyan.
Inkasta oo aanan xog fiican laga haynin hantida tirada badan ee adduunka ku kala baahsan ee Trump, haddane waxaa la ogyahay in uu horey usaga u sheegtay in hantida uu haysto ay dhantahay $10 bilyan oo doolar, taas oo ka dhigan in canshuurta ku waajibi karta ay dhantahay $4 bilyan oo doolar, haddii ay noqoto in la dhaxlo.
Image caption Qaar ka mid ah xildhibaanada Aqalka Congresska Maraykankan oo ka hadlaya hindise sharciyeedka Canshuurta
Arrin kale oo qeyb ka ah qorshaha cusub ee canshuurta ee Trump ayaa ah in uu hoos u dhigo canshuurta ku waajibta shirkadaha ama ganacsiyada waaweyn, halkii ay markii hore ahayd 35%, ayuu hadda ka dhigayaa 20% boqolkiiba.
Tan waxa aad ugu faraxsan ganacsiyada waaweyn ee Maraykanka.
Tan aad uma saamayn doonto Trump maadaamaa ganacsiyadiisa uusan u maamulin sida hal shirkad oo kale, balse uu u maamulo sida ganacsi qoys ahaaneed.
Ganacsiyada ka badan 500 ee uu madaxweynaha leeyahay, hadda looma canshuuro sida shirkad oo kale, ee waxaa loo canshuuraa mid mid ah iyo heer qof ahaaneed.
Shaqsiyaadka uu Trump ka mid yahay ee ganacsiyadan ku kala qoran waxa ay bixin doonaan 39.6% boqolkiiba dakhliga soo gala.
Qorshaha cusub ee canshuurta ayaa waxa uu Trump doonayaa in uu hoos ugu dhigo canshuurtaasi illaa boqolkiiba 25, waana qoondo aad u yar.
Duqa magaalada New York oo u digay Donald Trump
Musharraxa madaxweyne-nimada Maraykanka ee xisbiga Jamhuuriga, Donald Trump, ayaa lala car